Shina: “Dingana Lehibe Mandroso” ao Hebei · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2019 3:19 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Mey 2010)
Mihoatra ny 1000 ny mponina ao amin'ny faritanin'i Hebei ho voakasiky ny fandroahana an-tery alohan'ny 5 Jona, ao anatin'ny tetikasa fampandrosoana ataon'ny governemanta, izay nantsoin'ny hevitra antserasera hoe “Dingana Lehibe Mandroso”.
Hahazo 2 miliara yuan (293 tapitrisa dilara) ho ampiasaina amin'ny fanamboarana tranobe vaovao sy ny fampandrosoana amin'ny taona 2010 ny distrikan'i Guangping, faritra mahantra any atsimon'i Hebei, hoy ny tatitry ny Southern Daily. Ny tetikasa, fantatra amin'ny anarana ofisialy hoe “Tanjona milina 11168,” dia mitaky fandravana ireo trano 330.000 metatra toradroa sy fandroahana mponina maherin'ny 1000 ao amin'ny faritra.
Tsy misy endrika mazava amin'ny fanonerana napetraka ho an'ireo olona voaroaka. Amin'ny endrika mody mangarahara, na koa safotofoto ao amin'ny governemanta Guangping, nanonona manampahefana iray misahana ny fampandrosoana ao amin'ny faritra ny Southern Daily izay nilaza fa “tsy misy fifanekena fandroahana na famindran-toerana natao tamin'ireo mponina.”
Nantsoin'ny hevitra antserasera ho ohatra iray hafa amin'ny lisitra mitombo misy ireo fandroahana tsy ara-dalàna ao Shina ilay tetikasa. Ny sasany nampitaha ny tetikasa fampandrosoana amin'ny Dingana Lehibe Miroso tamin'ny taona 1958, tetikady fampandrosoana mampidi-doza sy tsy voahevitra izay tompon'antoka tamin'ny fahafatesana noho ny hanoanana miisa14 tapitrisa ka hatramin'ny 43 tapitrisa.
Tamin'ny famakafakana tao amin'ny Southern Weekend, miantso ny drafitra ho toy ny tranga mbola mahazatra sy mampalahelo i Xiao Shuio. Milaza izy fa raha mikasika ny fakàna tany, dia ny governemantan'ny tanàna sy ny mpampiasa vola no tonga voalohany, raha toa ka 5-10 isanjato monja amin'ny tombony azo avy amin'ny tany no fanonerana ho an'ny tantsaha.
Araka ny filazan'i Xiao, ny fandaniana 2 miliara yuan ao amin'ny faritra manana tetibola isan-taona 130 tapitrisa yuan (19 tapitrsa dolara) dia maneho karazana fandrosoana diso lalana. “Ny fampandrosoana no fivoarako. Tsy misy ifandraisany aminao izany. Tsy maintsy mandao tsy misy fepetra ianao, “hoy izy nanoratra am-piesoesoana.
Nahasarika ny saina tao amin'ny aterineto ireo tarehimarika ireo. Luo Shibin manontany ny lojika ara-bola momba ny drafitra ao amin'ny lahatsoratra bilaogy:
Nahoana izy ireo no tsy nanao sonia fifanekena fanonerana na nanatontosa dingana famindran-toerana sahaza ho an'ireo olona? Mendrika hiadian-kevitra ity olana ity. Faritany mahantra i Guangping ary sangan'asa mitaky fanohanana ara-bola goavana ity tetikasa manontolo fametraha-milina ity. Saingy 130 tapitrisa yuan ihany no fidiram-bolan'ny faritra. Koa avy aiza ny vola maherin'ny 2 miliara yuan?
Ao amin'ny lahatsoratra bilaogy, milaza i Dou Hao fa tsy nahavita nanatsoaka lesona tamin'ny fahadisoana teo aloha i Guangping:
Raha mampiasa ny fitenenana hoe “Dingana Lehibe Androsoana” ianao mba hamaritana ny asa fandroahana feno fahasahiana ao amin'ny faritra Guangping, dia mifanaraka tsara ilay anarana. Namela ny firenena tao anatin'ny fahatsiarovana maharary sy lesona lalina ny “Dingana Lehibe Androsoana”. Satria miala amin'ny zava-misy ary mandika fitsipika manan-danja ity karazana fampandrosoana ity, ka tokony hosazina araka ny fitsipika. Ny mahagaga dia ny governemantan'i Guangping no nanao ny fahadisoana “manadino ny fanaintainana taorian'ny fahasitranan'ny ratra.” Mbola hanohy ireo fandroahana manelingelina sy tetikasam-panorenana ihany ve izy ireo?
Gaoyuan-Zhixing manoratra ao amin'ny bilaogy fa na dia tsy niraharaha ny sitrapon'ny vahoaka aza, dia manaiky fotsiny ny toro-lalan'ny lehibeny avy ao amin'ny Tanànan'i Handan, fahefana misahana ny faritra Guangping ireo tompon'andraikitry ny faritra:
Raha mikasika ny tsy fisian'ny fanadihadiana sy ny fikarohana avy amin'ny manampahefana ao Guangping, ny tsy fahombiazan'izy ireo hametraka ny mahasoa ny olona ho laharam-pahamehana amin'ny asany sy ny fanatanterahana an-jambany ny sitrapon'ireo manampahefana ambony, ny tsy fisainan'izy ireo manimba ny vahoaka sy ny fihetsika mandika ny lalàna- dia tsy mendrika finamanana izany fa fanoseham-bohontanana. Saingy diso lalana ny fanomezan-tsiny rehetra ho an'ny faritra Guangping, sy mamelively azy ireo. Manatanteraka ny baiko avy any ambony fotsiny izy ireo. Ireo [tompon'andraikitra] ambaratonga ambony no mamaritra ireo asa rehetra ireo. Tsy ny Faritra Guangping akory no fiandohan'ny olana , fa ny lehibeny, ny tanànan'i Handan.